Fandraharahana any Emiràja ao Dubai - Real estate Dubai avy amin'ny Provident
Hetra amin'ny Emirà ny Dubai
Lalàna No. (14) an'ny 2008 momba ny Hetraketraky ny Emirà ao Dubai
WE, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mpitondra ao Dubai
Taorian'ny nahafantarana ny Lalàna Federaly No. 5 an'ny 1985 mikasika ny fifampiraharaham-bahoaka, araka ny fanitsiana; Lalàna federaly No. 8 amin'ny 2004 momba ny faritra tsy misy fetrany; Lalàna No. 7 an'ny 2006 momba ny fisoratana anarana ara-dalàna ao amin'ny Emiratin'i Dubai;
Fitsipika No. 3 amin'ny 2006 izay manondro ireo faritra izay tsy manana tompon-tany UAE manana fananana ara-barotra ao amin'ny Emiratin'i Dubai;
Lalàna No. 8 ao amin'ny 2007 momba ny kaonty fitokisana fitantanana tranombarotra ao amin'ny Emiratin'i Dubai;
Lalàna No. 27 an'ny 2007 momba ny fananana ny fananana iombonana ao amin'ny Emiratin'i Dubai; ary
Lalàna No. 13 an'ny 2008 manitsy ny fisoratana anarana momba ny fananan-tany ao amin'ny Emiratin'i Dubai
Famaritana & Fanapariahana ankapobeny
Io Lalàna io dia antsoina hoe "Lalàna No. (14) amin'ny 2008 momba ny Hetraketraky ny Emirà ao Dubai".
Ireto teny sy teny manaraka ireto dia tokony hanana ny heviny mifanohitra amin'izany raha tsy hoe angaha tsy mifanaraka amin'ny andininy hafa:
sampan-draharaha: Departments of Lands & Properties.
Head: Lehiben'ny sampana.
Property: Ny tany sy ny rafitra maharitra napetraka eo amboniny izay mety tsy hoentina tsy misy fijaliana na fanovana.
Property Unit: Ny ampahany voasivana amin'ny Trano misy ny sora-baventy rehetra, izay misy ny fizarazarana eo amin'ny faritra.
Real Estate Register: Dokam-barotra voatahiry ao anaty taratasy na elektronika ao amin'ny departemanta izay manome ny firaketana an-tsoratra farany momba ny zon'ny tena.
Interim Real Estate Register: Dokam-barotra voatahiry ao anaty taratasy na elektronika ao amin'ny Sampan-draharahan'ny fifanakalozan-kevitra rehetra momba ny fivarotana ny fananana sy ny fandaniana ara-dalàna hafa dia voarakitra voalohany alohan'ny handefasana azy any amin'ny Real Estate Register.
antoka: Fepetra iray ahafahan'ny mpampindram-bola mahazo antoka momba ny fananan-tany na ny fananan-tany momba ny fandoavana ny trosany, alohan'ny mpitrandraka tsotra sy ny mpitrandraka ambany kokoa, avy amin'ny lanjan'ny fananana na aiza na aiza toerana ary na iza na iza.
Mortgagor: Ny tompon'ny fananana na ny tompom-pahazoan-dàlana havanana na ny zo manokana ao amin'ny fifanarahana amin'ny varotra nosoniavina tamin'ny tompon'ny fananana izay voamarina fa nivarotra an-tsokosoko ary voasoratra anarana ao amin'ny rejisitra momba ny fananana na ny trano fonenana tsy tapaka hisoratra anarana.
Mortgagee: Mpampindram-bola iray izay mampindrana vola amin'ny mpigadra amin'ny fiarovana ny fananana izay misy ipso facto na ipso jure.
Ny fepetra voalazan'ity Lalàna ity dia mihatra amin'ny Fitrandrahana ny Tahirim-bola sy ny Tahirim-bola ho antoka ho an'ny trosa. Tsy misy fahasamihafana raha toa ny trosa azo antoka amin'ny fiantohana ny fananana manontolo na amin'ny fisian'ny tombotsoa azo avy aminy na amin'ny zon'ny olon-droa na amin'ny zon'ny olon-droa mifandraika amin'ny fananana voamarina toy ny fivarotana.
Ny Mortgagee / creditor dia tokony ho banky, orinasa na orinasa ara-bola izay nomena fahazoan-dàlana ary voasoratra anarana amin'ny Banky Foibe UAE mba hanomezana vola ho an'ny Tahiry ao amin'ny UAE.
1. Ny mpangalatra dia tsy maintsy tompon'ny tompom-pahazoan-dàlana sy ny fananana tsy manan-kialofana ary afaka manamboatra izany. 2. Ny mpangalatra dia mety ny trosa na ny mpiantoka amin'ny rambony izay manatanteraka Mortgage amin'ny anaran'ilay mpangalatra. 3. Ho an'ny sokajy 22, 23 & 24 amin'ity Lalàna ity dia tsy maintsy ampisehoana ny Fitrandrahana momba ny Fananana na ny Tahirim-bola momba ny Tahirim-bola ny ipso facto na ipso jure tsy misy drafitra rehefa vita ny Hetra.
4. Ny Mortgage dia tsy azo ovàna afa-tsy ny fananana na ny tetikasa fananana izay azo alaina.
Ny fividianana entana dia ahitana ny fahatsapana rehetra amin'ny Property or Property, anisan'izany ny tranobe, ny zavamaniry, ny toerana voatondro / apetraka ary ny fanatsarana natao taorian'ny fifanarahana Mortgage.
1. Ny Mortgage dia tsy manan-kery raha tsy voasoratra ao amin'ny Sampan-draharaham-panjakana ary misy fifanarahana amin'ny mifanohitra amin'izany dia tsy manan-kery.
2. Ny Mortgagor no hitondra ny sanda amin'ny fifanekena raha tsy misy ny fifanarahana ataon'ny antoko.
1. Ny fangatahana momba ny fandefasana vola dia apetraka amin'ny Sampan-draharaham-panjakana ary hosoniavin'ny Mortgagor sy Mortgagee na ny mpiantoka any, raha misy, anisan'izany ireto:
a) Ny vaovao rehetra mifandraika amin'ny fananana
b) Sarobidy ny fananana
c) Sarobidy ny trosa
d) Fepetra fampindramam-bola
e) Ny antsipiriany manokana momba ny mpangalatra, ny fandefasana vola ary ny mpiantoka, anisan'izany ny trano sy toeram-ponenana.
2. Ny fifanekena fifanintsanana dia hosoniavina amin'ny fampiasana ny endri-tsoratry ny Departemantam-panjakana sy ny Filam-baovaon'ny Antenimiera na ny Tahirim-bola Real Estate Real Estate, araka ny tranga mety, dia havaozina mifanaraka amin'izany. Ny famaritana ny Mortgage dia voafaritra amin'ny daty fisoratana anarana.
3. Ny Departemanta dia hanome ny antokon-draharahan'ny fifanekena amin'ny fanaovana hosoka amin'ny sonia ny manampahefana manam-pahefana sy ny tombon-tsoan'ny Departemanta.
4. Azo atao amin'ny endriny elektronika ilay taratasy fampindramam-bola ary azo ekena ho porofo amin'ny fototra mitovy amin'ny taratasy fanamarinana an-tsoratra.
Ny Mortgage dia tsy maintsy miantoka trosa izay mitentina na ampanantenaina amin'ny famaranana ny Mortgage.
Vokatra ara-dalàna momba ny fandaniana
Ny Mpanjifa dia tsy hivarotra, fanomezana na fananana hafa na fananana na fananana tsy miankina na tsy miankina na mamorona izay zon'ny olon-tokana na fananana manokana momba ny Tahirim-bola momba ny Lozam-bola na tsy manan-kialofana raha tsy nahazo ny fankatoavana ny Mortgagee ary omena ny tompon'andraikitra manaiky ny handray ny adidy amin'ny Mortgagor eo ambany fifanekena. Ny mety hitrandraka amin'ny fifanarahana ara-barotra dia mamaritra ny fiantohana iraisan'ny mpangataka sy ny tompon'andraikitra amin'ireo adidy aman'andraikitra ireo.
Raha toa ny fepetra momba ny fifanekena fampindram-bola dia manome ny Lohateny Mortgagee amin'ny Lalàna momba ny Lozam-pifamoivoizana rehefa tsy mahomby ny fandoavana ny trosa fitrosana mandritra ny fe-potoana voatondro, na ny fivarotana ny Lozam-pifamoivoizana nefa tsy mandray ny dingana ara-dalàna, Amin'ny lafiny iray dia tsy misy fepetra. Ny fehezan-dalàna dia tsy manan-kery raha ampidirina ao anatin'ny fifanarahana eo aoriana.
Ny Mortgagor dia manan-jo hitantana ny fananan'olon-tokana azy ary hanangona ny fahazoany sy ny fidirany mandra-pahafeno azy sy mivarotra amin'ny varotra ampahibemaso noho ny tsy fisian'ny trosa.
Raha toa ka misy ny fatiantoka na ny fahavoazana amin'ny fananan'ny tompona antoka, ny fampidiram-bola amin'ny fisotroan-dronono hisolo toerana ny vola ary ny Mortgagee dia afaka manarona ny fitakiany amin'ireo vola ireo araka ny laharam-pahamehany.
Ny trosa dia mety ho voarakitra fotsiny amin'ny trano voakosoka ary ny mpiantoka amin'ny hatsaram-panahy dia mety tsy hikatsaka ny famerenana ny fanànan-trosa amin'ny alàlan'ny fampiharana ny tsy fananana trano.
1. Ny Lozam-piarakodia dia afaka manome ny zony eo ambany faneken'ny mpitrosa. Ny asa fanendrena dia voasoratra ao amin'ny Departemanta.
2. Ny mpitrandraka / mpampindram-bola dia afaka manome ny lanjan'ny Mortgage ho an'ny mpampindram-bola iray hafa izay manana fiantohana fiarovana amin'ny tany mitovy.
Ny fandefasana antoka dia manome toky fa ny vola voatondro ao amin'ny fifanekena fampitrosana fampitrosana raha tsy misy ny lalàna na fifanarahana hafa.
Ny karazana Mortgage dia voafaritra amin'ny laharan-tariby izay isaky ny fisoratana anarana amin'ny Departemanta. Raha toa ka misy fangatahana maro atolotra amin'ny fotoana mitovy amin'ny fisoratana anarana Hetraketraky ny mpangalatra mitovy amin'izany sy ny fananana mitovy, dia ho voasoratra anaty lisitra mitovy ny isan'ireo antontan-taratasy ary ireo mpitahiry vola dia hizatra mitovy amin'ny famarotana ny vidin'ny varotra.
Ny Mortgage / creditor dia mety hanaraka ny Tanànan'ny Lalàna ho eo an-tanan'ny olona iray manana azy mba hahazoany ny fandoavana ny fangatahany raha tokony ho araka ny laharana. Ny olona iray dia heverina ho fananana ny fananan-tany raha toa ka mahazo ny lohateniny amin'ny tany izy aorian'ny fakana antoka na mahazo zon'ny hafa na ny zo manokana momba ny fananana.
Ny Mortgagor no hiantoka ny fananana trano voakosoka ary hitazona izany amin'ny toe-pahasalamany mandrapahazoan'ny trosa. Ny Mortgagee dia mety hanohitra ny tsy fahampian'ny antoka ary haka izay fepetra ara-dalàna ilaina mba hiarovana ny zony sy hamerenana ny fandaniana amin'ny Mortgagor.
Tapitra ny fividianana ny fanonerana ny trosa azo antoka.
Ny mpihazona Musataha dia mety haka trano na zavamaniry mandritra ny fe-potoana ao amin'ny Musataha raha tsy manana zo hisoroka ny tany tokony hivoatra raha tsy misy ny fifanarahana.
Ny tompom-pahazoan-dàlana na fampindramam-bola maharitra mandritra ny fe-potoana eo anelanelan'ny 10 sy 99 taona dia mety hampanan-kery ny fahalianany amin'ny Property or Property Unit ho an'ny fe-potoana ny fampindramana na fandaniana maharitra.
Ny Mortgage amin'ny zon'ny musataha, ny fampiasana na ny fandaniam-bola maharitra dia hamarana sy hosafidiana avy any amin'ny rejisitra amin'ny famerenana ny trosa azo antoka amin'ny Hetra na amin'ny vanim-potoanan'ny fampiasana musataha, fampiasana na fandaniana maharitra.
Ny mpividy ny Unité Immobilier na ny fananana izay voamarina fa nivarotra na nanangana azy dia mety hikarakara azy ireo ho fiantohana ny trosa raha toa ka voarakitra ao amin'ny Tahirim-bola Iraisam-pirenen'ny Interim Real Estate voatazonan'ny Departemanta ireo singa na fananana.
Fametrahana ny fepetra momba ny fananana tsy maty
Amin'ny tsy fanatanterahana ny fandoavana ny trosa raha tokony ho izy na amin'ny fahatanterahana ny fepetra ahafahana manonitra ny fahazoan-dàlana aloha, ny Mortgagee / creditor na ny mpandimby azy manerantany na manokana dia tsy maintsy manome ny tompom-bola na olona iray tompon'ny tompom-pahazoan-dàlana momba ny fananan-tany na ny fananana ara-barotra 30 andro Notarafana mialoha ny fanombohana ny famonoana.
Article (26) Raha toa ka tsy mandoa ny Hetra ny mpangalatra / mpangalatra na ny mpandimby azy manerantany na ny mpiantoka ao anatin'ny fe-potoana voatondro ao amin'ny Andalana teo aloha, ny mpitsara dia tokony hiankina amin'ny fangatahan'ny Mortgage / ka azo amidy amin'ny varotra an-tsokosoko araka ny fomba amam-panao ao amin'ny Departemantam-panjakana izany.
Raha tsy izany, ny mpitsara mpandoa hetra, raha tsy efa nangataka ny trosa na ny mpiantoka azy, dia afaka manolotra ny fivarotana amin'ny alàlan'ny varotra ampahan-tany hatramin'ny 60 andro ary indray mandeha raha tsy hitany fa:
a) Ny Mpisambotra / Mpitrosa dia afaka hamerina ny trosany raha omena ity vanim-potoana ity.
b) Ny fivarotana ny fananan'ny tompona orinasa na fananan-tany dia hampisy fahasimbana ho an'ny trosa.
Raha araky ny andininy 25, 26 & 27 amin'ity Lalàna ity, ny tsy fandoavana ny trosa ao anatin'ny fe-potoana voamarina, dia hametraka ny Tranok'aretim-bola voavidy amin'ny varotra an-tsokosoko araka ny fomba amam-panao ao amin'ny Departemanta ao anatin'ny 30 andro aorian'ny faran'ny potoana voalaza ao amin'ny lahatsoratra tsirairay.
Ny tompon-trosa na ny mpiantoka azy dia mety hamerina ny trosa azo antoka sy ireo mpanampy azy alohan'ny fotoana voatondro.
Ny fanambarana ny Mortgagees / creditors dia aloa amin'ny vidin'ny Property Unit na ny Fananana na avy amin'ny fananana mpanolo-tena ho laharam-pahamehana na dia efa voasoratra daholo aza ny Hetraketraky ny androtr'io andro io. Raha toa ka tsy ampy ny fivarotana mba handrakofana ny filazana ny mpampindram-bola iray, dia mety hitaky ny fahasamihafana amin'ny mpitrosa ilay mpampindram-bola.
Ny Fehezan-dalàna mifehy ny asa sivily (Lalàna federaly No. 5 amin'ny 1985), araka ny fanitsiana, ary ny Fehezan-dalàna momba ny asa sivily (Fehezan-dalàna No. 11 amin'ny 1992) dia ampiharina amin'ny raharaha rehetra izay tsy misy fepetra ao amin'ny Lalàna.
Ny fananana nomen'ny governemanta ho an'ny olom-pirenena UAE sy ny olona tahaka izany ho an'ny tanjona ara-barotra sy ny toetr'andro dia tsy voafehin'ity Lalàna ity ary mety hampiharina ny baiko sy ny torolàlan'ny Mpitantana sy ny fanapahan-kevitra amin'ny fampiharana azy.
Ny asam-panafahana arahin'antoka araka ny voasoratra ao amin'ny Lalàna dia mifamatotra amin'ny antoko fahatelo.
Ny Lefitry ny Departemanta dia manome ny fanapahan-kevitra ilaina amin'ny fampiharana ity Lalàna ity.
Io Lalàna io dia havoaka ao amin'ny Gazetim-panjakana ary haka ny valiny 60 andro taorian'ny famoahana azy.
Navoaka tao Dubai tamin'ny 14 August 2008